रोचक Archives - Page 11 of 17 - Samudrapari.com
बिहान उठ्न मनै लाग्दैन ? हुन सक्छ यस्ता रोगको संकेत
काठमाडौं – तपाईलाइ पनि बिहान मनै नलागेर अजै सुतौ सुतौ झैँ लाग्छ र ढिला सम्म सुत्ने बानी छ भने साबधान हुनुहोस् । यस्तो किसिमको बानीले स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ । यदी तपाइँलाई पनि विहान उठ्न गार्हो हुन्छ भने तपाइँलाई यी रोगको समस्या हुन सक्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुको अध्ययनले यस्तो भन्छः १. यदि कुनै पनि मानिस विहान ढिलासम्म सुत्छन् भने उनीहरुको दिमाग बढी निराश हुने गर्दछ । यस्ता खालका ब्यक्तिहरुमा आत्महत्याको भावना समेत बढी हुने गर्दछ । २. जुन ब्यक्ति दिउसोको समयमा सुत्छन् उनीहरु मोटोपनको शिका...
केरलाको कोतायाममा २१ वर्षीया किशोरीलाई आफ्ना प्रेमीमाथि यौनहिंसा गरेको आरोपमा सोमबार पक्राउ गरिएको छ । १७ वर्षे प्रेमीकै घरमा बस्ने ती किशोरीलाई प्रहरीले त्यतिबेला पक्राउ गर्यो जब पीडितकी आमाले आफ्ना छोराविरुद्ध यौनहिंसा भइरहेको भनी पुलिसमा मुद्दा दर्ता गरिन् । मुद्दा दर्ता भएपछि रामपुरमका पुलिस किशोरको घरमा जाँदा दुईजनालाई एउटा कोठाभित्र चुकुल लगाएर बसेको अवस्थामा भेटिए । पुलिसले जति आग्रह गरेपनि बाहिर ननिस्किएपछि ढोका फोडेरै उनीहरुलाई बाहिर निकालिएको बताइएको छ । रिपोर्टका अनुसार यो जोडीक...
रिसको झोंकमा प्रेमिकाकै कुकुरलाई टोकेपछि ७ वर्ष जेल
प्युर्टेरिको – अमेरिकी राज्य प्युर्टेरिकोमा एक जनालाई कुकुरको टाउको टोकेको आरोपमा ७ वर्षको जेल सजाय भएको छ । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार ४० वर्षीय लुइस अर्रोयोलाई जनावरमाथि खराव व्यवहार गरेको र घरेलु हिंसामा दोषी पाइएको भन्दै अदालतले उक्त सजाय तोकेको हो । यसअतिरिक्त उनलाई ३ हजार डलर जरिवाना पनि तिराइने भएको छ । लेर्स सहरमा बस्दै आएका उनले गत फेब्रुअरीमा प्रेमिकाको घरमा रहेको दुई महिनाको कुकुरलाई टोकेका थिए । उनले कुकुरको टाउको मै नराम्ररी टोकेका कारण घटनास्थलमै कुकुरको मृत्यु भएको बताइन...
काठमाडौं – हरेक आमाबुवाको चाहना आफ्नो बच्चा राम्रो र गोरो जन्मियोस् भन्ने हुन्छ तर संसारमा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ गोरो बच्चा जन्माउनु अपराधसरह मानिन्छ ।परम्पराको नाममा भारतमा यस्तो थुप्रै स्थानहरु छन् जहाँ अन्धविश्वासले जरो गाडेको छ । केन्द्र शासित प्रदेश अंडमानमा परम्पराको नाममा जारवा जनजातीका मानिसहरु आफ्नै बच्चालाई मार्ने गर्दछन् । हुन त यहाँ पनि बच्चा रोएको सुन्नेबित्तिकै उत्सव मनाइन्छ तर यदि बच्चाको रंग कालो नभएर थोरै पनि सफा भए उक्त बच्चालाई मारिन्छ । उक्त बच्चा अरु समूदायको जस्तो देखिने...
काठमाडौं – सामान्यतया गर्भाधारण गरी बच्चा जन्माउन महिलालाई ९ महिना लाग्छ । तर एकजना महिला भने केवल ७ दिनको अन्तरमा दुई पटक आमा बनेकी छिन् । तपाइँ सोँच्नुहोला, यो कसरी सम्भव भयो रु तर यो वास्तवमै सत्य हो । घटना चीनको हो । चेंग नाम गरेकी एक महिलाले ७ दिनमा दुई छोरी र एक छोरालाई जन्म दिएकी छिन् । ती महिला २० वर्षकी चेंगलाई प्रसव पीडा सुरु भएसँगै उनले गत २१ फेब्रुअरीमा अस्पतालमा नर्मल डेलिभरीबाटै एउटा छोरा जन्माइन् । ३० हप्ताको गर्भपछि समय नै नपुगीकनै उनको बच्चा जन्मिएको थियो । छोरा जन्मिएसँगै...
मोटो अनुहारलाई स्लिम देखाउन यस्तो मेकअप
कतिपय महिलाको अनुहार उनीहरूको शरीरको तुलनामा ज्यादै मोटो देखिन्छ । जसले गर्दा सामान्य मेकअप तथा ड्रेसअप मात्र गर्दा असुहाउँदो देखिन सक्छ । मोटो अनुहारको मेकअपमा ध्यान नदिँदा भद्दा देखिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । यस्तो समस्या हुने अधिकांश महिलाले घरेलु विधि अपनाउने गर्छन् । तर, यस्तो विधिले सधैँ काम गर्छ भन्ने हुँदैन । विभिन्न घरेलु उपायले पनि समस्या समाधान भएन भने ब्युटिसियनकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । अनुहारको आकार तथा मोटाइअनुसार फरक तरिकाको मेकअप गरेर यस्तो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । मोटो अनुह...
स्वस्थ रहन बाख्रासँग योगा, तनाव र दुखमा परेकालाई निकै राहत
काठमाडौं – स्वस्थ रहनका लागि स्वस्थ जिवनशैली तथा पोषिलो खानपान आवश्यक पर्छ । आजकलका मानिसहरु जिउलाई फिट राख्नका लागि घण्टौँसम्म व्यायाम तथा अनेकथरी योगा पनि गर्छन् । दुनियाँमा योगा गर्ने तरिका विभिन्न खालका छन् । हुँदाहुँदा मानिसहरुले अब योगा गर्नका लागि जनावरको समेत सहारा लिन थालेका छन् । अमेरिकामा अहिले बाख्रासँग योगा गर्न थालिएको छ, जसलाई मानिसहरु गोट योगा भन्छन् । अमेरिकाको ओरेगनमा पछिल्लो समयमा एउटा ट्रेण्ड चलेको छ । त्यहाँ बाख्रे योगा अर्थात् गोट योगा लोकप्रिय बनिरहेको छ । बाख्रे...
काठमाडौं – आफ्नो यौन जीवनको सम्पूर्ण तथ्याङ्क राख्ने र यौन सम्पर्क गर्दा खर्च भएको ऊर्जा हिसाब गर्ने स्मार्ट कन्डम अब पुरुषका लागि उपलब्ध भएको छ । आई–कोन स्मार्ट कन्डमले यौन क्रियाकलापबाट सर्ने रोगहरूबाट समेत सुरक्षा दिने छ । आविष्कार गर्नेहरूले सन् २०१७ मै स्मार्ट कन्डम उपलब्ध हुने जानकारी दिएका छन् । स्मार्ट कन्डमले यौन सम्पर्कमा लागेको अवधि, त्यसका लागि खर्च भएको क्यालोरी, लिङ्गको चाल सङ्ख्या, गति र गोलाई तथा हरेक हप्ता, महिना र वर्षमा अपनाइएका आसन लगायतको तथ्याङ्क राख्दछ । स्मार्ट कन्...
बंगलादेश – यो कुरा सुन्दा जति अनौठो लाग्दछ, पत्याउन पनि उत्ति नै मुस्किल पर्छ । फिल्म तथा कथाहरुमा त भूतका किस्साहरु खुबै हेर्नुभएको तथा सुन्नुभएको होला । तर वास्तविक जिवनमै भूतले केटीलाई केटा बनाइदिएको घटना यदि सुन्नुभयो भने । बंगलादेशमा हालै एउटा यस्तै अपत्यारिलो घटना सार्वजनिक भयो । बंगलादेशी भूत मान्छेको लिंग परिवर्तन गरिदिन समेत माहिर रहेछ । एक बालिकाको परिवारको दाबी पत्याउने हो भने भूतले ती बालिकालाई बालक बनाइदियो । बंगलादेशको एक दुर्गम गाउँमा रहेको एउटा परिवारले गाउँभरी यस्तो अफवाह फैल...
बोसोयुक्त खानेकुराको सेवनले पुरुषलाई बढी असर गर्छ
काठमाडौं – यो सत्य हो कि उच्च चिल्लो तथा बोसोयुक्त खानेकुराको सेवन जो कोहीका लगि पनि लाभदायक हुँदैन । तर सवाल यो उठ्दछ की यसको मापदण्ड के हुने ? आखिर धेरै बोसोयुक्त खानेकुरा कत्तिको नोक्सानदायक हुन्छ ? डाक्टर जोए विलियम्स भन्नुहुन्छ, धेरै फ्याटयुक्त खानेकुराले गर्ने असर महिला र पुरुषमा फरक फरक हुन्छ । धेरै फ्याटयुक्त खानेकुरा खानाले हाम्रो वजन बढ्दछ तथा मुटु सम्बन्धी समस्या पैदा हुने खतरा हुन्छ । खासगरी जब तपाइँ ओमेगा सिक्स फ्याट जस्तो खराब खाले चिल्लो पदार्थ धेरै खानुहुन्छ । यो फ्याट...